﻿	ဝက်ခြံထွက်တာပုံမှန်လား? | Find My Method
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ဆေးလုံး » ဝက်ခြံထွက်တာပုံမှန်လား?
FSRH The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (Amended 2019). FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. မှရယူရန် https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/combined-hormonal-contraception/